အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ယုတ်ညံ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
J ကို SCH သူနာပြု။ 2015 ဇန်နဝါရီ 6။ pii: 1059840514563313 ။
Romito P ကို1, Beltramini L ကို2.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ 702 အီတလီဆယ်ကျော်သက်တစ်နမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖြစ်တယ် (46% အထီး; အသက်အရွယ် = 18.2, SD က = 0.8 ဆိုလို) ။ အထီးကျောင်းသားများကိုများထဲတွင် 11%, ထိတွေ့ကြသည်မဟုတ် 44.5% အကြမ်းမဖက်ပစ္စည်းထိတွေ့ ဖြစ်. , 44.5% ပစ္စည်းလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည် / အကြမ်းဖက်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ 60.8% ထိတွေ့ကြသည်မဟုတ်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများကိုများထဲတွင်, 20.4% အကြမ်းမဖက်ပစ္စည်းထိတွေ့ ဖြစ်. , 18.8% ပစ္စည်းလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည် / အကြမ်းဖက်ထိတွေ့ခဲ့သည်။
, အရက်ကိုအသုံးပြုပြီး / လိင်ကိုဝယ်ရောင်းချတဲ့သူမိတ်ဆွေများကိုရှိခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီးလျှင်ယောက်ျားများအနက်ညစ်ညမ်းလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည် / အကြမ်းမဖက်ဖို့ထိတွေ့ချိန်ညှိလေးသာမှုအချိုးအစား (AdjOR) ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း / နည်းပညာဆိုင်ရာကျောင်းတွေတက်ရောက်ခြင်း, မိသားစုအကြမ်းဖက်မှု၏သားကောင်များ ရှိ. , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီးအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မြင့်မား AdjOR သူအမျိုးသမီး; / လိင်ကိုဝယ်ရောင်းချတဲ့သူမိတ်ဆွေများကအကြမ်းမဖက်နှင့်ထိတွေ့မှုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည် / အကြမ်းဖက်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ရှိခြင်း။
အကြမ်းဖက် / စော်ကားသောညစ်ညမ်းထိတွေ့မှာ-အန္တရာယ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်မြီးကောင်ပေါက်တို့တွင်ဘုံဖြစ်တယ်,, အမျိုးသမီးများအတွက်ပါကသားကောင်တစ်သမိုင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ကျောင်းသူနာပြုများဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ကြားဝင်အတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုများ, လိင်, ဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုများအပါအဝင်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများ.
မြီးကောင်ပေါက်; ကျား, မကွဲပြားမှု, အထက်တန်းကျောင်း; ညစ်ညမ်း; ကျောင်းကကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ; ကျောင်းကသူနာပြု; အကြမ်းဖက်မှုများ